YTL ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းသည် မလေးရှာနိုင်ငံ၏ကျော်ကြားလှသည့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအမွှာအဆောက်အအုံ(Petronas Twin Towers)၊ အရှေ့တောင်အာရှ၏အရှည်ဆုံးတံတား (Second Penang Bridge)၊ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ဘက်စုံသုံးဉမင်လှိုင်ခေါင်း (SMART Tunnel )၊ အရှေ့တောင်အာရှ၏အမြန်ဆုံးရထားလမ်း (Express Rail Link from Kuala Lumpur International Airport to Kuala Lumpur City Centre) အစရှိသည်တို့တွင် ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်. ရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုများကို ဉီးစားပေးပြီး အသင့်သုံးကွန်ကရစ်ဖျော်စက်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားသော ဘိလပ်မြေ စ်ပါသည်။. လူနေအိမ်များ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။
Lot C23၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံ